Baolina lavalava :: Foana avokoa ireo fifaninanan’ ny Rugby Afrika • AoRaha
Nanapa-kevitra ny hanafoana an’ireo fandaharam-potoanan’ny fifaninanana rehetra amin’ity taompilalaovana ity ny Rugby Africa na ny Kaonfederasionan’ny baolina lavalava aty Afrika. Taorian’ny fivoriana nataon’izy ireo, tamin’ny alakamisy lasa teo, no nandraisana an’izany fanapahan-kevitra goavana izany mba hitandroana voalohany indrindra ny fahasalaman’ireo atleta aloha. Nisy ny fakan-kevitra tamin’ireo Federasionan’ny baolina lavalava mpikambana ao amin’ny Rugby Africa mialoha an’izao fanambaràna izao.
Misy hatrany kosa ny hetsika natokana ho an’ireo mpitsara lalao sy mpanazatra miisa fito amby fitopolo aty Afrika, amin’ny alalann’ny fampiofanana ampitain-davitra sahanin’ny Rugby Africa. Hanana solontena valo amin’ izany i Madagasikara. Mpitsara avokoa izy valo mianadahy handray anjara amin’ny fizaràm-pahalalana, hoentin’ i Alain Rolland, mpampiofana mpitsara baolina lavalava matihanina ao amin’ny Worl Rugby.
Araka ny nampitain-dRakotomalala Marcel, filohan’ny Malagasy Rugby, dia “vehivavy ny roa amin’ireo mpitsara malagasy matihanina miisa valo izay voafantina amin’izao hetsika izao”. Efa nanomboka, tamin’ny 19 sy 21 mey 2020, ny andiany voalohany tamin’ny fampiofanana.
Hatramin’ny volana jolay kosa ny faharetany. Haharitra valo herinandro ny fampiofanana.
Fahamehana ara-pahasalamana :: Hihiboka tanteraka ny faritra Atsinanana